I-City Centrum Penthouse enembono yolwandle - I-Airbnb
I-City Centrum Penthouse enembono yolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSari
Ngaba ujonge igumbi eliqaqambileyo, elitofotofo nelipholileyo kwindawo esembindini kwiziko laselwandle laseKemi? Le iya kuba yi balcony kumgangatho we-6. 79m2 iflethi kumgangatho ophezulu we-k-ndlu ene-lifti. Ukujongwa kweendlela ezi-3, ulwandle kunye nesixeko.
Indlu inomz. I-sauna ye-infrared kunye namathuba amahle okupheka, izixhobo ezibanzi, umenzi wekofu, i-microwave, iketile, i-toaster. Kule ndlu uya kuziva ukhululekile, phumla kwinkampani elungileyo ixesha elide. Isixeko esilula ukuhlala kwindawo elungileyo.
Indawo yokuhlala ikwaqwalasela awona malungu mancinane entsapho. Ibhedi, isitulo esiphezulu.
Imidlalo yebhodi yokunxibelelana. Ukusuka kwibalcony ekwehleni izilayidi.
4.78 · Izimvo eziyi-158
Zonke izinto eziluncedo zikufutshane, kumgama wokuhamba.
Iindawo zokutyela ezikufuphi, ibala lokudlala kunye nevenkile yokutya zingaphantsi kweemitha ezingama-200. Umgama ukuya kwinqaba yekhephu malunga neemitha ezingama-600, ukuya kwipaki yeenja malunga neemitha ezingama-200. Ukuba ufuna ukuthenga umgama umalunga neemitha ezingama-800 kuphela. Umgama oya elwandle umalunga neemitha ezingama-300.
Idama lokuqubha, izibuko langaphakathi laseKemi malunga ne-600m.
Kufuphi nombindi wesixeko ungahamba kakuhle ...
Siyakuvuyela ukukunceda ngefowuni nge-Airbnb phakathi evekini. Ubusuku bemihla ngemihla bunokufikelelwa kwisiza ukuba kuyimfuneko. Ngorhatya nangeempelaveki sikwafumaneka.